05 Febroary 2020 - FJKM Québec - Canada Hoy ny Tompo: "Zanako Ianao, homeko anao ny famindrampo mahatoky nampanantenaina".
05 Febroary 2020
5 février 2020 by Njaka Ramanandafy
Ny teny momba ny famonjena
ASAN’NY APOSTOLY 13 : 26-37
13:26 Ry rahalahy, taranak’i Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an’ Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin’izao famonjena izao.
13:27 Fa izay monina any Jerosalema sy ny loholony, satria tsy mba nahafantatra Azy, na ny feon’ny mpaminany izay vakina isan-tSabata, dia nahatanteraka izany tamin’ny nanamelohany Azy.
13:28 Ary na dia tsy hitany aza izay tokony hanamelohana Azy ho faty, dia nangataka tamin’i Pilato ihany izy hamonoana Azy.
13:29 Ary rehefa nahatanteraka izay rehetra voasoratra ny amin’i Jesosy izy, dia nanaisotra Azy tamin’ny hazo ka nandevina Azy tao am-pasana.
13:30 Fa Andriamanitra kosa nanangana Azy tamin’ny maty.
13:31 Ary Izy niseho andro maro tamin’izay niara-niakatra taminy avy tany Galilia ho any Jerosalema, ka dia ireo no vavolombelony amin’ny olona ankehitriny.
13:32 Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo, dia ilay teny fikasana nolazaina tamin’ ny razana,
13:33 dia ny nahatanterahan’Andriamanitra izany tamin’ny zanatsika, raha nanangana an’i Jesosy Izy, araka ny voasoratra eo amin’ny Salamo faharoa hoe: Zanako Ianao, Izaho niteraka Anao androany (Sal 2.7).
13:34 Ary ny amin’ny nananganany Azy tamin’ny maty, ka tsy hiverina ho amin’ny lo intsony Izy, dia izao no voalazany: Homeko anareo ny famindrampo mahatoky nampanantenaina an’i Davida (Isa 55.3).
13:35 Fa hoy Izy eo amin’ny Salamo hafa koa: Tsy hamela ny Iray Masinao ho tratry ny lo Ianao (Sal 16.10).
13:36 Fa i Davida, rehefa nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra hahasoa ny olona niara-belona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin’ny razany izy ary tratry ny lo;
13:37 fa Izay natsangan’Andriamanitra no tsy mba tratry ny lo.
Ampahatsiahivin’i Paoly Apostoly ny làlana nitondran’Andriamanitra ny Zanak’Israely . Ny nanafahana azy ireo tany amin’ny tany Egypta , ny nanomezana azy ny tany Kanana , ny nanomezana mpanjaka ary indrindra ny teny fampanantenana momba ny taranak’i Davida.
1-Manambara an’i Jesoa Kristy zanak’i Davida
Notanterahan’ Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy ny famonjena izao tontolo izao .Tsy kisendrasendra izany fa efa voasoratra tao amin’ny Soratra masina rehetra efa novakiana sy nampianarina ny Jiosy . Ireo Jiosy no tsy nahalala , tsy nandray Azy. Ny fanamelohana an’i Jesoa Kristy , ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty dia efa voasoratra avokoa . Tsarovy ao amin’ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no hahafantarantsika ny làlam-pamonjena voasoratr’ Andriamanitra ho antsika .
2-Mampahafantatra fa i Jesoa Kristy no Mpamonjy
Io teny fikasana nataon’ Andriamanitra ho an’ny Zanak’Israely dia tanteraka tao amin’i Jesoa Kristy . Niharan’ny fahafatesana i Davida kanefa tratry ny fahalovana . I Jesoa Kristy kosa ,ilay avy amin’ny taranak’i Davida no ambara hoe: « tsy hamela ny iray Masinao ho tratry ny lo ianao ».Mampahafantatra antsika ny Tenin’Andriamanitra fa tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy no notanterahan’Andriamanitra ny teny fikasana ho famonjena izao tontolo izao . Ampahafantaro ny manodidina anao izany .
Nahoana no misy olona misalasala ny amin’ny famonjena notanterahin’ Andriamanitra ho antsika tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy?